Pancake eyenziwe nofulawa wombila: iresiphi ngesithombe
Indlela ukupheka pancake eyenziwe nofulawa wombila? Indlela Yokuthola imikhiqizo efanayo, sizobe ukuchaza esihlokweni samanje.
Ngokungafani pancake abavamile dessert eyenziwe nofulawa wombila uphendulela segolide ithenda. Khonza yona etafuleni kungaba nanoma iyiphi ofakwe nososo (anosawoti amnandi).
Lezi pancake abe kujabulise kakhulu futhi ecebile corn ukunambitheka. Ngakho ake ndawonye sibheke ezinye izindlela ukuze lesi sidlo.
Pancake eyenziwe nofulawa wombila: isithako somuthi nokusetshenziswa ubisi
Akekho indlela indlela ukupheka pancake nge nofulawa wombila. Ngemva kokwenza ezifana imikhiqizo Culinary can nobisi, yogurt, ngisho nokusetshenziswa kwamanzi ezivamile noma amaminerali.
Ngakho yiziphi izithako udinga ukuthenga ukuze uthole pancake okumnandi eyenziwe nofulawa wombila? Recipe imikhiqizo kuhlanganisa:
ibhotela ukunambitheka ngaphandle ukupheka - nezinkezo enkulu mayelana 4;
corn ufulawa - 5 nezinkezo ezinkulu;
vanilla ushukela - ½ ithisipuni;
baking powder - umbhangqwana dessert nezinkezo ;
ufulawa kakolweni - 5 nezinkezo ezinkulu;
hhayi fresh kakhulu ubisi fat - ngu-380 ml;
eluhlaza inkukhu neqanda - 2 PC.
caster ushukela - 3 wezipuni ezinkulu;
uLwandle Lukasawoti - a schepotochek ambalwa.
Indlela ukupheka pancake eyenziwe nofulawa wombila? Recipe imikhiqizo enjalo kudinga ukusetshenziswa endishini enkulu. Kuyadingeka ukuba aphule amaqanda ke shukela uphehle ngokucophelela noma ekuphambukeni. Ngemva kwalokho, uthele ufulawa umkhiqizo edingekayo usawoti, baking powder, vanilla ushukela, ukolo corn.
Zonke ngokucophelela elixutshwe, izithako kufanele uthele ubisi olufudumele namafutha elicwengiwe. Inhlama okuholela kufanele embozwe ithawula washiya ekamelweni lokushisa imizuzu 20.
Indlela ethosiwe pancake eyenziwe nofulawa wombila? Ungadliwa for imikhiqizo efana ezidinga ukusetshenziswa epanini ezivamile. Kufanele ibe okuhle kulungele, bese uthele amafutha bese efakwa kancane Batter. imikhiqizo Fry kusukela nofulawa wombila nhlangothi zombili kufanele kube ngendlela evamile.
Ngemva ukupheka pancake, kufanele kahle ugcobe ibhotela.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukupheka pancake eyenziwe nofulawa wombila. Ungadliwa imikhiqizo efana lowomuntu kumuntu kumele kudingeke ukuba Cookbook yabo. Phela, ukwenza kube lula futhi elula, kodwa ukunambitheka ngeke abashiye ubani nandaba.
Khonza pancake etafuleni Kunconywa, kanye amnandi noma elungisiwe sauce efudumele. Futhi, imikhiqizo izinto nanoma yimuphi ukugcwaliswa. Ngaphezu le dessert kufanele khona amnandi black itiye.
Pancake eyenziwe nofulawa wombila: zokupheka ngezithombe
Uma ufuna pancake omuncu ngaphezulu okuzenzela ke ukupheka kubo is hhayi Kunconywa in ubisi kefir. Dairy isiphuzo uzokwenza dessert esihlwabusayo kakhulu futhi zibe nephunga elimnandi.
ibhotela ukunambitheka ngaphandle ukupheka - mayelana ezimbili nezinkezo ezinkulu;
corn ufulawa - 400 g;
obukhulu amafutha yogurt - 1 L;
soda - isipuni akuphelele;
abilisiwe amanzi afudumele - ½ inkomishi;
caster ushukela - 3 spoon ezinkulu (engeza ukunambitha);
Salt - a schepotochek ambalwa.
Ngiyiqala kanjani ukupheka pancake eyenziwe nofulawa wombila? Recipe ngaphandle ubisi sihlinzekela ukusetshenziswa nezitsha yensimbi ezijulile. Kuyadingeka ukuba uthele wonke yogurt, bese ukushisa kancane ke phezu kwesitofu. Ngaphezu kwalokho, i-elibilile ubisi isiphuzo liyadingeka uthele soda isipuni bhaka ufake it out.
Ngemva izithako phezani Foam, kufanele engeza amaqanda washaywa, ushukela, amafutha yemifino kanye usawoti. Govuza izithako ngesitjeni sinye liyadingeka uthele cornmeal. Thola isisekelo kuhle obukhulu, kufanele buhlanjululwe efudumele amanzi abilisiwe. Ngenxa yalokho, le nhlama kufanele yenziwe kwesokunxele kuya ¼ ihora.
Inqubo ukupheka pancake
Indlela Fry pancake eyenziwe nofulawa wombila? Recipe ngaphandle ukukhiqizwa imvubelo kanye ubisi kudinga ukusetshenziswa a sensimbi ukuthosa epanini. Kufanele kube kushisa kakhulu ukuba ngixoxe nezinkezo kawoyela, wayesebeka inhlama. Fry pancake mncane futhi omkhulu ukuba eside kangaka aze abe kamnandi. Ngemva kwalokho, bonke izimpahla siphelile kudinga obuningi amafutha amafutha okupheka kanye indawo ipuleti oluyisicaba inqwaba.
Ukuhanjiswa kwemikhiqizo ukudla etafuleni
Ukuze abenze nakakhulu okumnandi futhi okunomsoco, bakwazi ukuphonsa nhlonhlo isiraphu, ubisi olujiyile noma uju. By endleleni, abanye besifazane ukusebenzisa le mikhiqizo kanye nososo elungisiwe. Futhi izinto ezinhle nabo phansi inyama nelayisi, cottage shizi no amakhambi. Ujabulele ukudla kwakho!
Senza pancake okumnandi for amanzi carbonated
Bambalwa abantu bazi ukuthi lamanzi esiphethu carbonated etholakala crepes simnandi kakhulu (nofulawa wombila). Recipe ngaphandle amaqanda akuzona bemthanda besifazane. Nokho, ngesikhathi sokuzila ukudla Christian Omkhulu izindlela ukupheka pancake kuyoba usizo kakhulu. Ake sihlole kabanzi iresiphi.
Ngakho, sidinga izithako ezilandelayo:
corn ufulawa - 200;
ufulawa kakolweni - 200;
lamanzi esiphethu carbonated - 500 ml;
Salt - pair schepotochek.
Njengoba ubona, iresiphi Meatless pancake okuzenzela angadingi ukusetshenziswa izithako ezibizayo futhi ezingavamile. Ngaye, sidinga imikhiqizo elula kalula.
Ngakho, ngaphambi kokuba uqale ukuthosa pancake, kumelwe uxove inhlama akuyona obukhulu khulu. Ukuze lokhu kufanele endishini ezijulile uthele lamanzi esiphethu carbonated, bese ngokushesha uthele nalokho isipuni soda. isithako esebenzayo kuhlangene-carbon dioxide futhi ucime kahle. Uma usebenzisa amanzi ethafeni, soda ayacelwa ukuba abuyisele ijusi lemon noma uviniga.
Ukubeka kokubili izithako endishini, bafuna ukwengeza Eluma ambalwa usawoti, ushukela ne bhotela. Kamuva e ngesitjeni sinye kufanele uthele kakolweni nofulawa wombila. Ngenxa yalokho, kufanele uthole substrate okunamathelayo. Ukwenza kube izacile, kutuswa ukwengeza amanzi kancane amaminerali.
Thosa pancake kusukela inhlama amanzi carbonated kufanele kube nse imikhiqizo ezivamile. Ngenxa yale njongo, a sensimbi ukuthosa epanini kuyadingeka ukuze uthele kancane ibhotela, bese reheat it ngokugcwele. Kamuva e izitsha ufuna ukushicilela inhlama ngaphambilini okuphekiwe, usebenzisa ngesipuni enkulu noma ladle.
Ukuze ube round waphenduka, bushelelezi futhi Pancake elincanyana, ngemva kokwakhiwa isivivinyo pan Kunconywa ukuba ngokushesha ungatshekisa bacondze etindzaweni letehlukene. Ukwenza kanjalo kuyoba nesandla ekusakazekeni kwezindaba isizinda.
Thosa pancake kufanele kube nhlangothi zombili. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi basuke kuphekeke kahle.
Ngemva yokuwugazinga umkhiqizo idinga ngokushesha susa epanini ngokushesha gcoba ibhotela. Njengoba for izitsha evuthayo, khona-ke kuyadingeka ukubeka batch esilandelayo inhlama, okuyinto kufanele Fry ncamashi ngendlela efanayo njengoba kuchaziwe ngenhla.
Ukulungiselela kanye ezinamafutha akahle zonke pancake, kufanele embondelene phezu isicaba ipuleti futhi ngokushesha abeke etafuleni kanye itiye hot, ikhofi noma ezinye isiphuzo. Uma wayefisa, imikhiqizo kungenziwa wethulwa Ubisi olujiyile, isiraphu, ujamu noma uju evamile. Ujabulele ukudla kwakho!
Inkukhu endaweni kubhayela double. Ukupheka AMACEBISO
Shortcrust khekhe. izimfihlo ukupheka
French ushizi ikhekhe: iresiphi for khekhe dessert
Amakhukhi Soft. Iresiphi for indlu
Isi-Abkhazian ekhishini: izici zokupheka
Pegasus - ihhashi ezinamaphiko intandokazi ye Muses
Oilcloth Indwangu wasekela. Izici futhi umehluko kusuka kwamanye kleenok
Kanjani ukuba babhale indaba ngesihloko esithi "imbongi engiyithandayo ka XX leminyaka '?
Red Izinwele - kungcono Ukuziqhenya kwakho!
Yenza imbulunga iqhwa ngezandla zakhe - uNcibijane isikhumbuzo!
Namathe yakho ayikakufanelekeli kuze kube okhalweni? Isivuvu lwesinaphi alungise lesi simo
Derzhavin Shirvindt: Biography, umsebenzi njengoba duo futhi Filmography